“IYYAAFANNOO! YAA ILMAAN OROMOO NAMAA KANAA NUU JIBBAACHISAA! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“IYYAAFANNOO! YAA ILMAAN OROMOO NAMAA KANAA NUU JIBBAACHISAA!
“Namni suuraa siif erge kun Aadam Tbbeessoo Badhaasoo jedhama. Dur ABO ofiin jedha ture. Amma Badhaadhinna keessatti basaasaa cimaa tahee ummata keenya cinqaara. Yoo siif tahe of eeggadhu naa jedhiin. Iddoon inni keessa sochohu godina Shawaa bahaa fi Arsii lixaati”
YAA ILMAAN OROMOO NAMAA KANAA NUU JIBBAACHISAA!
Ani Liibani Moluu Guyyoo Galmaati. Namii ani iyyaafadhu abbaa kiyya, Moluu Guyyoo Galmaati. Dhalataa Godina Booranaa aanaa Dirree ganda roomsoti, biftii isaa gurraacha baay’es dheerinnas, gabaabinnas hin qabneedha, Gosa booranaa ykn miiloo booranaa karrayyuu dhanqaa, balbalaa gabartittii, Hariyyaa booranaa Wakoora diidati(waggaa 50 hin caalle jechuudha). Akkuma beekkamutti armaan dura shira diinaan xaxameen ilmaan oromootaa walnyaachisuun nama hundaafuu ifaadha. Dhabamuun isaas, gaafas bara 1999.E.C. yeroo waliti bu’iinsa oromoiyaa kibbaa lola dheeda foroolee iddoo kaampii jedhamtuti daangaa oromoo keeniyaatii fi itiyoophiyaatti dhabame. Du’a isaa namnii argee hime hin jiru ture. waan hedduun walqabsisee du’uu fi jiraachuun isaa nu shakkisiisaa jira, akkoo tiyya haadha isaa , aayyoo tiyaa, nuu ilmaan isaa fi firaa fiixaan teenna, dhalaa hariyyaan hunda jibbaachuu dadhabaa jirra. Hariyyootii isaa ergaa lola jalqaban (cabsaa qaraa) agartaa hin himan.
Namii khuun nama jajjabaa waraanatti aanaa ture, gaafas qofa osoo hin taanee lola diinaan wal lolan hunda irraatti lolchiisaa ture, kabachiisuu daangaa oromiyaatif lolchiisaa turuu isaa hariyyootii isaa kan isaan irree(humna) waliif ta’aa turani ni himu. Lola Achiin duraa diinaan walitti bu’an irratti aabbon diina irraa dhiira lama kan diinaaf wantee ta’an ijjeesuun meeshaa lama booji’eedha, boorannii guutus ni beeka ture.
Wantii jibbaachu nuu dhowee
1. Gaafa bara 2005.E.C. Oduun (Daa’imtuun) maddii isii hin beekkamne irraa dhageenne. Oduun tuni abbaan keessan hin doonee yeroo suniti madaa’un qaaamnii hidhataa kan mootummaan biyya keeniyaa qabuun lubbuu isaa bararee mana hidhaa biyya keeniyaa “kaamit maximum prison” kan magaala naayirobbiiti jira waan, jedhaa dhageennee turre.
2. Gaafa 22/01/2009.E.C. Qaamnii biyya bulchu, OPDOn godina booranaa Aanaa Dirree abbaan keessan moluu Guyyoo Galmaa mana hidhaa turuun isaa dhugaadha, garuu ammaaf mana hidhaatii gadi dhiifamuun Waraana Adda bilisummaa Oromootti dabalamee jira jechuun, isaniin maatii maatii isaa quba qabdani, isaanis Walmari’achaa jirtan jechuun kora gandaa Fuloo roomsoo irraatti dubbatani.
Jechii kun duraanuu oduu madda amanamtuu hin ta’in suni irraa dhufte sun waan dhageennee hunda caalaa jibbaachuu nu dhowweedha. Haallii gaafasii qorannoo bira darbee maatii keennaa hundaan isaan quba wal qabdani jechuun hunda mana hidhaatti darbataa turani, akkoo tiyya haadha aabboo dhalte jaartii ganna 70 Oli dabalatee maatii teenna hunda mana hidhaatti darbatani. Nuti yeroo suniti hidhamuun maatii keenna hundaa osoo nu hin yaaddesin jiraachun Abbaa keennaa osoo dhugaa ta’ee jechaa turre. akka yaada qaamnii mootummaa waan salphaatti irra gahuu waan danda’uuf jiraachuun abbaa keennaa dhugaadha jennee abdachaa turre. Garuu hanga ammaatti homaa arguu hin dandeenne.
Sababa kan hundaaf aabboo jibbaachuu nu dhibdee mee waan agartanii dhageettan gurmuu gosaa gurra nuu buusaa!
0925572093 Lakk kanaan naa iyya’aa waan agartanii dhageettan!
Horaa Bulaa Deebanaa!”
Liiban Moluu Guyyoo